आठ देशका नयाँ राजदूत नियुक्तिको गृहकार्य सुरु, परराष्ट्रमा नयाँ सचिव को ? « Drishti News – Nepalese News Portal
आठ देशका नयाँ राजदूत नियुक्तिको गृहकार्य सुरु, परराष्ट्रमा नयाँ सचिव को ?
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार १ : ०१ मा प्रकाशित
कोरोना संकटका बेला कतिपय नेपाली दूतावासहरु निमित्तका भरमा चलेका छन् । जसकारण ती देशबाट नेपालीहरुको उद्धार समेत यतीबेला प्रभावित भएको छ ।
धेरै नेपाली रहेको दक्षिण कोरियामा करिब दुई वर्षदेखि राजदूत पद रिक्त छ । त्यस्तै, श्रीलंका तथा दक्षिण अफ्रिकामा पनि रिक्त भएको लामो समय भइसकेको छ । भागबन्डा नमिल्दा सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन । अमेरिकामा करिब एक वर्षदेखि अर्जुन कार्कीलाई नै म्याद थप गरेर राखिएको छ ।
अबको चार महिनामा थप चार देशका राजदूतको कार्यकाल पुरा हुँदैछ । पाकिस्तानकी सेवा लम्साल, बेलायतका दुर्गा बहादुर सुवेदीको असोज , जर्मनीका रमेश प्रसाद खनालको भाद्र तथा बेल्जियमका लोकबहादुर थापाको असोजमा कार्यकाल सकिदैन । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धि मापदण्डमा रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । आठ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्रले यससम्बन्धि तयारी थालिसकेको छ ।
समयमा राजदूत नियुक्ति एकातर्फ सम्बन्धित देशमा नेपालको सेवा प्रभावित भएको छ भने अर्काेतर्फ राजदूतको पालो कुरेर परराष्ट्रका कर्मचारीको करिअर समेत प्रभावित बनेको छ । राजदूत नियुक्तिमा ५० प्रतिशत बाहिरबाट तथा ५० प्रतिशत परराष्ट्रका करिअर डिप्लोम्याटलाई पठाउने गरिएको छ ।
परराष्ट्रमा नयाँ सचिव को ?
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले आगामी असोजबाट अवकाश पाउने भएकाले नयाँ परराष्ट्र सचिवका लागि समेत दौडधुप सुरु भएको छ । परराष्ट्रमा अन्य सेवाका सचिव नआउने भएकाले परराष्ट्रकै सहसचिवहरुबीच प्रतिस्पर्धा छ ।
सचिवका लागि भरतराज पौडेल, सेवा लम्साल र अमृत राईबीच प्रतिस्पर्धा छ । पौडेल हाल मन्त्रालयमै प्रवक्ताका रुपमा कार्यरत छन् । लम्साल पाकिस्तानमा राजदूतको रुपमा कार्यरत रहेकोमा साउनमा कार्यकाल सकिएर फर्कदैछिन् । राई संयुक्त राष्टंसघका लागि नेपाली रादजूतका रुपमा न्यूयोर्कमा कार्यरत छन् ।
बरियतामा तेस्रो नम्बरमा भएपनि राईको अहिलेको सत्तापक्षसँग राम्रो सम्बन्ध छ । दक्षिण अफ्रिकामा राजदूतको कार्यकाल पुरा नभई उनलाई परराष्ट्रले झिकाएर न्यूयोर्क पठाएको थियो ।
उता अवकाशअघि सचिव बैरागी भने अमेरिकाका लागि राजदूत बन्ने दौडमा छन् । अवकाशअघि परराष्ट्रका सचिवहरु अमेरिकाको राजदूत हुने विगतको प्रचलन छ । यसअघि जेनेभाका लागि राजदूत हुँदा कार्यकाल नै पुरा नभई फर्किएर उनी सचिव भएका थिए ।